Ciyaar ay ku lug leedahay koox Yurub caan ah oo ay caruur kaliya daawanayaan – SBC
Ciyaar ay ku lug leedahay koox Yurub caan ah oo ay caruur kaliya daawanayaan
Ciyaar kubada cagta ah oo ay ku lug leedahay kooxda Ajex oo ka mid ah kooxaha ugu caansan qaarada Yurub kana mid ah kooxaha waa weyn ee dalka Holand ayaa gabi ahaanba la diiday inay daawadaan qof da’diisu ka weyn yahay 13 sano, iyadoo loo ogolaaday caruurtu inay noqdaan daawadayaal.
Ciyaartan oo ak dhici doonta garoonka kooxda Ajex ee Amsterdam Arena waxay Ajex la leedahay kooxda AZ Alkmaar ee isla wadanka Holand ka dhisan waxayna ka mid tahay koobka Dutch Cup waana ciyaar dib loo ciyaarayo ka dib markii la baajiyey 21-kii bishii December xiligaasi oo taageere careysan oo garoonka orod ku soo galey uu feer iyo haraati ku qaaday goolhayah kooxda AZ Alkmaar, taasi oo keentey in goolyahaye Esteban Alvarado uu si caro leh ugu jawaabay feer iyo laad taageeraha soo wareeray.
Esteban Alvarado ayaa dagaalkaasi awgiis banaanka looga saarey ciyaarta, waxaana la baajiyey guud ahaan kulankaasi.
Hadaba xiriirka ciyaaraha dalka Holand ayaa soo saaray go’aan tibaaxaya in kulan ciyaareedkaasi gabi ahaanba aanay daawan karin daawadayaal oo ay garoonka ku ciyaaraan labada koox oo kaliya.
Maamulka kooxda Ajex ayaa ka codsadey xiriirka ciyaaraha Holand in daawadayasha ciyaarta loo ogolaado haweenka iyo caruurta, balse xiriirka ayaa ganafka ku dhuftey dalabkaasi iyagoo sheegay in ragga iyo haweenku ay isku mid yihiin isla markaana aan loo ogoleyn kulankaasi inay ka soo qayb galaan daawadayaal da’doodu ka weyn tahay 13 sano, taasi oo ka dhigan in kulankaasi ay soo buuxin dhaafin doonaan garoonka caruur.
Tigidhada lagu daawanayo ciyaartaasi ayaa ah lacag la’aan, waxaana lixdii ilmood loo ogolaaday hal qof oo masuuliyad ahaan ula socda oo garoonka la soo gala.